Dwom 64—Fa Anigye Yɛ Otwa Adwuma no Bi | Kristofo Dwom
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo English Ewe Fijian Finnish Fon French Ga German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Myanmar Ndau Ndebele Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zulu
Fa Anigye Yɛ Otwa Adwuma no Bi
1. Ɛ-b’re yi yɛ o-twa b’re kɛ-se;
Ho-kwan yi yɛ s’ron-ko ma yɛn.
Nnɔ-bae no a-sow a-yɛ bebree.
Ye-be-tu-mi a-twa no nnɛ.
Ye-su Kris-to a-yɛ n-hwɛ-so;
Ye-be-tie n’a-kwan-ky’rɛ nyi-naa.
Hwɛ sɛ-nea yɛ-wɔ a-ni-gye kɛ-se.
B’re bia-ra yɛ-kɔ a-sɛn-ka.
2. Yɛ-wɔ ɔ-dɔ ma nni-pa nyi-naa;
E-pia yɛn ma yɛ-ka a-sɛm.
A-sɛn-ka a-dwu-ma gye ntɛm-pɛ,
E-fi-sɛ wia-se yi bɛ-sɛe.
Yɛ-yɛ Ye-ho-wa ‘dwu-ma-yɛ-fo,
Ɛ-ma ye-nya n-hyi-ra pii.
Yɛ-de boa-se-tɔ bɛ-yɛ n’a-dwu-ma.
Na ye-be-twa nnɔ-bae no pii.
(Hwɛ Mat. 24:13; 1 Kor. 3:9; 2 Tim. 4:2 nso.)
Fa Anigye Yɛ Otwa Adwuma no Bi (Dwom 64)